4 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce | ECommerce nhau
4 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce
Jose Ignacio | | eCommerce, Marketing, Kutengeswa kweIndaneti, SEM
Zvichida kana iwe uine bhizinesi redhijitari iwe unonzwa kudiwa kwekuita mimwe yemishandirapamwe yeSEM ​​inogoneswa muchikamu. Asi kutanga pane zvese iwe unofanirwa kuziva kuti izwi rekuti SEM rinoreva chirevo cheKutsvaga Injini Yekushambadzira uye kuti ndipo patinotaura nezve yakabhadharwa yekutsvaga injini mushambadziro. Iri zano rakajairika mumabhizimusi epamhepo uye kubva kwaunogona kuwana mukana wehupfumi.
Nekuti mishandirapamwe yeSEM ​​pakupera kwezuva ichatibatsira gonesa kuoneka uyezve kuwedzera kuwanika kwemawebhusaiti uye mapeji nekuda kwezviito zvinoitika kubva kunjini dzekutsvaga. Ichi chinhu icho, kune rumwe rutivi, chiri chikamu chezvinangwa zvako kana uchiita chiitiko chehunyanzvi chehunhu uhwu. Hazvishamisi kuti iwe unofanirwa kurangarira kubva zvino kuenda kuburikidza neaya anotsigirwa ma ads pane izvo zvinotsvaga (Google AdWords, Bing Ads kana Yahoo! Tsvaga Kushambadzira) iwe unenge uri munzvimbo iri nani yekutyaira mhando traffic kune yako webhusaiti.
Kune rimwe divi, usakanganwa kuti achaita nhimbe dzeSEM dzeCommerce dzinogona kukuunzira mabhenefiti mazhinji kubva zvino zvichienda mberi. Semuenzaniso, kuti inogona kukwikwidza mumamiriro ari nani kupokana nemakambani anokwikwidza. Sezvo iwe uchagadzira munzvimbo pfupi kwazvo yenguva a dzoka zvirinani pane investimenti. Kubudikidza neshanduro dzakasiyana dzeSEM dzeCommerce dzatiri kuzokufumura pazasi kuitira kuti ugone kuishandisa pasina kunyanya kunetsa mumwedzi iri kuuya.
1 SEM mishandirapamwe: kugamuchira yakawanda traffic kubva kuGoogle
2 Gadzirira yako kuvhura
3 Shandisa akawanda mapoka mapoka
4 Mishandirapamwe yekumisazve
5 Mishandirapamwe yekutenga
6 Shanduko inokura muSpain ne250%
SEM mishandirapamwe: kugamuchira yakawanda traffic kubva kuGoogle
Ehe, Google ndiyo imwe yeanonyanya kutsvaga injini muchikamu ichi uye nekudaro iwe unofanirwa kutora mukana wacho mune yako purofiti yebhizinesi. Kubva pane ino pfungwa nzira, iwe unogona kusarudza yakanakisa mushandirapamwe unosangana nezvinodiwa zvako chaipo pabasa rako rehunyanzvi. Kubva pauri iwe chinzvimbo chekuzadzisa zvinotevera zvinangwa.
Mikana yekutengesa: kuburikidza nezviito zvinoitika mune aya mashandiro kubvira shanduko mune yekushambadzira midhiya.
Webhusaiti traffic: Icho chimwe chezvinangwa zvaunofanirwa kuzvimisikidza kubva panguva ino kuburikidza nechinhu chakareruka muchimiro sekuwana vashandisi chaivo kuti vashanyire webhusaiti yako.
Uye kune rimwe divi, iwe unenge uine zviwanikwa zvakakosha kuti rako rekutengesa rikosheswe uye zvakare nezve zvigadzirwa kana zvinyorwa zvaunoshambadzira. Icho, shure kwezvose, sarudzo yakasarudzika yakanangana nekubvumira vashandisi kuti vawane zvigadzirwa zvako kana masevhisi nenzira inonyengetedza kupfuura nakare kose.
Gadzirira yako kuvhura
Aya marongero ekushambadzira, kune rimwe divi, anozokutendera iwe kuve mune yakanakisa mamiriro ekugadzirira mushandirapamwe. paIndaneti haidi nguva yakawanda uye, mukuwedzera, inobvumira shanduko kuminiti, zvinoenderana nezvinodiwa nekambani yekushambadzira. Nemabhenefiti anobatika seaya atichakurongera izvozvi:
Inogadzira vhoriyamu yakanaka yevashanyi kubva pakutanga uye chii chakanyanya kukosha, segmented traffic.
Iwe unogona kuwana kushanyirwa kwakawanda uye izvo mune izvi zviitiko zvinogona kutonyanya kubatsira, zvemhando yepamusoro.
Mhedzisiro ndeyekuti kutengesa kwezvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu zvinowedzera kubva panguva iyoyo uye pasina zvakanyanya kuyedza pachikamu chako.
Ehe, iwe unogona zvakare kuwana iyo yemubvunzo yeese paramende. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kukwidziridza zviito zvese uye nekuzvidzora zvirinani.
Shandisa akawanda mapoka mapoka
Iyo imwe yemasystem ayo asingawanzo kutadza kuzadzisa zvinangwa zvako muchitoro chako chepamhepo kana bhizinesi. Izvi zvinodaro nekuti mapoka ekushambadzira atinogadzira, anowedzera simba macampaign edu, nekuti achadaro zviri nani zvikamu. Mupfungwa iyi, zvakakosha kuti iwe ugadzire uye uvatsanangure nemapoka nekuti pachave nezvimwe zvinoshanda zvirinani kune vamwe uye ndezvaunofanirwa kuita purofiti kubva ikozvino.
Imwe yematanho iwe aunogona kushandisa kuenda kune iwo anokwezva akakwirira nhamba yekubaya. Kuburikidza nemapaneru ekudzora anogona kudzorwa zviri nyore kupfuura pakutanga. Ndichiri kune rimwe divi, zvinogara zvichibatsira kwazvo kuti iwe uverenge pamitsetse mishoma kuti ubatanidze zita racho, zvinyorwa uye chinongedzo (URL) cheshambadziro. Ndiyo mhinduro inogona kukubatsira kunatsiridza zvinangwa zvawakagadzirira yako e-commerce.
Iri izano rakasarudzika iro rinogona kupa zvibereko zvekutanga mumabhizimusi epamhepo epamhepo kana izvo zvirinani zvisina kugadzirwa sezvawaitarisira kubva kwavari. Kwete pasina, kana mhando iyi yemushandirapamwe ichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti vanokutendera kuti uratidze kushambadza kune vashandisi vakambove kune webhusaiti yako kazhinji kana mune chimwe chikamu. Asi nemusiyano waunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi uye izvozvi kuti zviito izvi hazvina kuitwa sezvataida.
Neimwe nzira, uyu mukana wechipiri wavanokupa kuti usimudzire rudzi urwu rwechiito chekongiri. Iyo sisitimu inoenderana chaizvo nemhando dzese dzevashambadzi vanoda kuwedzera kutengesa kwavo uye vanovavarira avo vanogona kuve vatengi vanoshandisa chaiwo matekinoroji zvigadzirwa kuita kwavo mabasa. Mafomu maviri emushandirapamwe anogona kusiyaniswa:
Mune ino kesi, ivo vanovavarira kumakambani ane online chitoro kana bhizinesi uye vanoda kuita mushandirapamwe wekutenga kuti vaoneke mune akanyanya kutsvaga injini mukati mechikamu. Kune izvi, hazvidiwe chero zvodii kuti iwe usvike kubatanidza runyorwa rwemazwi akakosha mumushandirapamwe wakarongedzwa, sezvinoitika nemamwe marongero ane maitiro akafanana munzira dzawo.
Mune chero zviitiko zvacho, iri kirasi yemakambani ekutengesa anosiyana pamusoro pezvose nekuti anoshandiswa kuwedzera kutengesa muchitoro kana muchitoro chepamhepo. Zvakare kukwezva vashandisi vatsva vanogona kuve vanogona kuve vatengi kubva panguva iyoyo. Chekupedzisira, iwo mukana webhizinesi uyo wakavhurika kune avo vane basa reiyi mitsara yebhizinesi.
Nepo donzvo guru remushandirapamwe wevhidhiyo iri kuwedzera kusarudzika kwevashandisi vezvigadzirwa kana masevhisi, uye kuitira kuti zvishoma nezvishoma kusimudzira ruzivo rukuru rwechiratidzo chekutengeserana uye nemaki yayo inoenderana. Ndipo panokurudzirwa zvikuru kugadzira mhando dzakasiyana dzeizvi zvigadzirwa zvekuteerera kuti zvive nyore kusangana nevatengi nevashandisi. Pakupera kwezuva chimwe chezvinangwa zvakakosha kwazvo mukutengeserana kwemagetsi, sezvakaratidzirwa mumakore achangodarika nenhamba dzakapihwa nechikamu panguva ino. Nekuti iwe unogona kunatsiridza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo kubva pamhando dzakasiyana dzenzira munyika yekushambadzira kwedigital.
Kunyangwe nenzira yekupfupisa, zvichave zvakakosha kwazvo kuti kubva panguva dzino iwe unogona kumbotsanangudza zvinangwa zvemushandirapamwe wako. Kwete pasina, zvinoenderana navo, kubudirira kana kwete kwemhedzisiro yezviito izvi zvinoenderana. Nemisiyano iyo iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo kubva ikozvino zvichienda mberi, sezvazviri zvine musoro kuti unzwisise.
Shanduko inokura muSpain ne250%
Zvemagetsi zvekutengeserana muSpain zvave munzvimbo pfupi yenguva imwe yezvikamu zvinobudirira zvejira rebhizinesi nekuda kwekukura kwayo kusingamisike muhuwandu hwekutengesa. Mupfungwa iyi, National Commission yeMisika uye Kukwikwidzana (CNMC) inofungidzira kuti kudzoka kweecommerce munyika medu kwakabva pamamiriyoni 2.823 emamiriyoni kusvika pamamiriyoni gumi nemazana gumi nesere nematanhatu. Izvo mukuita zvinoreva kukura kwechimwe chinhu uye hapana chakaderera pane chimwe chinhu chinopfuura 10.116% mune ese mashanu emakore.
Asi chii chakanyanya kukosha panguva ino, kwete chete iyo iri kukura zvine chekuita nekutendeuka kwayo, asi zvinopesana, vatengi vepamhepo vari kukurawo munyika medu. Pakati pegore remari rapfuura, iyi paramende yakapfura kusvika kumunhu ari padhuze nemamiriyoni gumi nematanhatu veSpanish. Nekuratidza kuti ivo vakatenga zvigadzirwa zvavo online, zvinoreva kuti imwe 19% yekumberi pane manhamba egore rapfuura. Asi iyo yakakosha dhata inosimbisa kukwira kwemagetsi ekutengesa munguva ino ndeyekuti avhareji yekutenga mukondinendi yekare yapfuura, kubva pa18% kusvika 12%.
Chirevo chambotaurwa chinoratidza kuti kukura mukutengesa kwepamhepo munyika medu kwakajairika mune angangoita ese mapoka. Kunyangwe paine zvimwe zviripo zvinoenderana nezviri kuitika, senge mune anotevera zvikamu zvebhizinesi: fashoni (50%), runako nekutarisirwa kwega (41%) uye tekinoroji nemagetsi (39), seyakanyanya kukosha panguva ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » 4 mhando dzeSEM mishandirapamwe yeCommerce
Ndeipi nguva dzakanyanya kusarudza mune ecommerce?
6 maitiro ekuvandudza kushanda kwebhizimusi rako repamhepo